Faallo : Miyay Burburtay Haybadii Puntland ku lahayd Soomaaliya ? | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Faallo : Miyay Burburtay Haybadii Puntland ku lahayd Soomaaliya ?
Sep 11, 2019 - 21 Aragtiyood
Laascaanood ( Kalshaale ) Marka aan Leeyahay ma burburtay haybaddii butlaan waxaa aan uula jeeda in uu dhammaanayo qiimihii iyo heerkii ay joogtay butlaan kaas ahaa mid qofkii sheegtaa uu ahaa mudan ama ciddii maqashaaba ay siin jirtay mudnaan, taasina ma ahayn mudnaan ku timaadda cago-juglayn ama jajuub, ee waxay ahayd mudnaan ay butlaan lahayd taas oo ka dhigtay in ay noqoto meel dadku jeclaystaan maqalkeeda iyo joogisteedaba, luguna tiriyo in ay butlaan ahayd meel qofkii tagaa ama ku yimaadda uu ahaa xurmadleh miisaan leh.
Butlaan oo ah meelihii ay soomaali ku badbaadday, cidkastana ay ka dhiganaysay gabbaad, hanti badan oo soomaliyeedna ku ammaan heshay luguna tabcaday, Waxa ay noqotay meel mar lugu xisaabtamay, balse aan maanta ka duwannayn meel mar loo haajiray oo laga soo laabtay.
Siyaasad ahaan butlaan waxa ay ahayd meelihii uugu doonista badnaa nidaam dawladdeed oo soomaliyeed, taas oo maskax iyo maalba gelisay sidii la isugu keenilahaa soomaalidii kala irdhowday “kala fogaatay”
Dadaalkii badnaa ee butlaan iyo marti-soorkii soomaliyeed ee ahayd mid qof kasta oo soomaliyeed deegaankiisa ka mudnaa, waxaad mooddaa in uugu dambayntii butlaan noqotay sidii meel aan marnaba laga helin wax Abaal ah oo hore.
Tani ma aha mid aan anigu ku dhaliilaayo soomaalidii hore ugu bad-badday butlaan iyo kuwii hantida ku tabcadayba, waayo dadkaasi waxay ahayeen dad tegay dhul soomaliyeed waajibna ay ahayd in aysan cidi ka xigsan joogista iyo ku bed-qabka dhulkaas.
Waxaa wax kasta oo ay butlaan soo samaysay dhulka ku jiiday kana dhigay Hal-bacaad lugu lisay siyaasiyiinta deegaankaas hoggaanka ka noqonaysay muddooyinkii dambe iyo weliba metelaad xumada ku haysa dawladda dhexe.
Marka leeyahay kuwo dawladda dhexe ku metela, waxaan u jeeda wasiirrada iyo xildhibaannada oo noqday kuwo aan joogin heerkii laga rabay ee ahayd in mar kasta ay hor-boodaan xalkii ay hore u raadinjireen.
Kuwo badan waxa ay ku milmeen ka qaybqaadashada hannaanno badan oo aysan dawladda federalku raalli ka ahayn, taas oo dib u celinaysa hannaankii socday.
Waxaa loo baahnaa dhammaan masuuliyiinta butlaan ka jooga federaalka in ay yihiin kuwo u heellan sidii ay hore butlaan uugu heellanayd dhismaha soomaliya waarta, siidookale waxaa loo baahnaa in ay meesha ka saaran tabashada soo jiitamaysay muddadii dheerayd ee u dhexaysay butlaan iyo dawladda dhexeba, waana taas dhaliisha aan u jeedinayo anigu masuuliyiinta ku metela butlaan dawladda dhexe.
Dhinaca kale waxaa mooddaa in madaxdii timi butlaan muddooyinkii dambe ay ahayeen kuwo amminsan shaqada loo idmaday in ay tahay uun caqabad-gelinta dawladda dhexe, tanna waa dhaliil aan u jeedinayo hoggaannadii uugu dambeeyay ee qabtay butlaan, waxaa loo baahanyahay in hoggaanku ku baraarugsanyihiin butlaan in ay ahayd meeshii soomaali ku nabad heshay, haddana ay butlaan mudantahay in sidii ay soomaali u sii ahaato oo ay ka qayb-qaadato dhammaystirka shaqooyinka soo celinaya soomaliyadii awoodda lahayd.
Haddii hoggaanka butlaan uu mashquul ku yahay jigraaridda “dhibitaanka’ dawaldda dhexe waxaa meesha ka baxaysa in butlaan ay yeelato qiimihii ay hore u lahayd, waxaana si toos ah butlaan luugu arkayaa in ay tahay meelaha ay soomaali ka dhaqaaqi-weyday, waxaa ay butlaan noqonaysaa mid aan meelna laga tix-gelin iyada iyo dadkeedaba.
Wax kasta oo maanta butlaan haysta iyo si kasta oo loola dhaqmoba waxaa sabab u ah madaxdeeda aan marnaba ku hamiyayn ilaalinta wanaaggii butlaan
Puntland Waa Maamul Wanaagsan Laakiin Hal Cilad Ayaa Haysta Taasoo Ah Dawlad Walba O Somaliya Udhalatay isfaham La’aan
Shaki kuma jiro in Puntland la dhisey waqti Reer Qurac wada noqdeen Baro-qaxay aan
Dhaqaalo Xumo ha jirto lkn waxey aas aaseen MAQAAYAD ay lagu soo hirto.
Walaaca hadda heysto waxaa waaye
Powerkii Reer Qurac oo Jubbooyinka u wareegey iyo Harti Waqooyi oo Somaliland raacey.
Hadey helaan Kaalmo shisheeye
Iyo TAAKULEYN BANAADIR dhib kama jiridoono maamulka BARI IYO NUGAAL.
GUUL PUNTLAND hooyadii Federaalka.
Ubax Ismail says:
Puntland waa dawlad Ilaah ayaana ka dhigay hadii aysan taasi jirina soomaalidu ma ay heleen meel ay ku bedbaadaan, madaxda iyo shicibka reer puntland soomaalidu waa ay yaqaanaan waxa ay gudaan iyo waxa ay galaan waa hadii aan la is yeelyeelaynin. Hal caqabad oo reer puntland hortaagan oo ay qaadan la’yihiin ayey madaxda xamar ku kacaan taas oo anfariir iyo amakaag ku riday madax iyo shiciba dadka reer puntland, taas oo ah in ninkii ay heybtiisu noqoto reer puntland shaqada xilka dowlada federaalka uu ka hayo laga qaado, dhaqaalaha milatariga caalamku uu ugu talo galay in hal ciidan beeleed aan qof reer puntland ahi uusan ku jirin la fangareeyo,iyo IN REER PUNTLAND HANGOOL LABA AF LEH LAGU QABTO,mana aha wax qabta reer puntland. Taasi macnaheedu ma ahan wax kasta oo yimaada puntland hala wada siiyo ee waxaa weeye ilaah ha laga baqo oo qof wal wixii uu xaq u leeyahay ha la siiyo, hada waxaa socda ama aniga i ayid si aan xukunka ugu soo noqdo ama cunaqabateyn u diyaar garow, ogow oo qofka saas lihi ma uu oga inta uu gaari doono oo cimrigiisii ka hartay aakhirana xiaabtu waa ku kaligiis,marka waxaa leeyahay war dadow Ilaah ha laga baqo, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aniga oo ah gabar reer puntland ah qormadeydii.
Wa biAllaahi Towfiiq.
War dadoow waxaa loo bahanyahay inaan runta Wajahno ANNAGOON cidna garab saarin cidna FIIRIN (fogayn). °Dawladihi Somali ee ka horrey TAN Farmaajo/Khayre amaba ayyaamihi ugu horrey ee tan laftigeeda waxay ku dadaaleen inay Puntland baalka gashadaan oo shir kasto lagu qabto Garowe “hadde akhristoow ogow waa degaan aan Somali oo dhan degin Balse ay Beel kaliya degte. °Madaxdi maamulkaa magaran hiilkaa ULA jeedadiisu ahayd Kobcinta dhaqaalaha degaankaa BALSE waxay u qaateen “sidaan ka fahannay dhaqankooda” in làaantood aysan Somali dhanna u dhaqaaqi karin Markaasu Mr DANI ka maagay inuu xushmeyo madaxdi Qaranka ama XAMAR tago. °Ciyaal balanbalo Farmaajo/Khayrana ma aha niman u nugul Yasidda noocaasa. °Haddaba Garowe waxay ku noqotay Maqaamki magaalo madax Gobol sida kuwo badan. °Intaa caqli celin iga dheh. WBT
Pudland waa maamulka kaliya ee ka sheqeya koofurta somaliya. Hadeey si dhab ah ula sheqeyn lahayeen dowladda villa somaliya isbedel fiican ayaa dhici lahaa. Laakiin taas wexey ka door bideen in ay hafraan hadaan ayaga wexey donaan aan loo sameyn. Hadda waa caqabadda kaliya ee hor taagan dowlad walbo oo timaado.
Pudland waa buro caloosha kaga taal koofurta somaliya xalka kaliya ee banaan waa laga fikiro sidii looga taqalusi lahaa.
Waa in lasoo kacshaa governo galaan.
Pudland midnimo waxaa uga dhaw Somaliland taas meel iiga qora.
Sida @ Ubax sheegtey
Waqtigii Talyaani Cararkii waxey BANAADIR u balan qaadey Puntland -Kuraas Maslaxo
1. Guddoomiyihii Bangiga Banaadir – Reer Puntland (Waxaa lagu bedalay REER WAQOOYI AAN JOOGIN)
2. Taliyahii Police Banaadir State -reer Puntland (waxaa lagu bedalay Reer Waqooyi aan joogin)
3. Taliyaha Asluubta reer K.Galbeed
4. Taliyaha Nabadsugidda reer Hirshabeele
5. Taliyaha Military reer BOONDHEERE
(Governor,Dekedda iyo Airport XISAABTA KUMA JIRAAN)
-Waa run oo reer Puntland laguma aaminikaro xafiisyada Madaxweynaha iyo Rasalwasaaraha lkn sidaan ka dhago dhageeyay GOOFKA, Guddoomiyahii Bangiga iyo Taliyahii Police waxey ahaayeen ODOYAAL MACQUUL AH oo Shaqadooda yaqaano.
-Kablalax ama Banaadir hala shaqeeyo ama shisheeye hala shaqeeyo (No Labo Gaaweeto ).
Shacabka puntland dega waxay laf dhabar u ahaayeen gobonimo doonkii gumaysiga looga xoreeyey wadanka.
Waxay qayb libaax leh ka qaateen sidii soomaaliya dowlad democracy ah uga hana qaadi lahayd. Taana way ku guuleysteen.
Nasiib darro 1969 ayaa waxaa taladii la wareegey dad aan waligood talin wixii lasoo tabantabinayey 9 sano oo xorta la ahaa ayaa cagta lagu duftay. Abaalkii loo galay reer puntland wuxuu noqday in la qixiyo,wixii wax garada la dilo ama xabsi lagu hubsado,Soomaali oo dhan loo tuso inay yihiin reer dadka iskala sareeya oo qabyaalad iyo qalalaase dalka iyo bulshada kula dhex jira sidaa daraadeedna ay waajib tahay in birta laga aslo ama si kasta oo loo fogayn karo loo fogeeyo.
Heeso iyo maansooyin toos loogu durayo madaxdii kacaanka ka horeysey oo cay iyo af la gaado ah ayaa idaacadaha laga sii dayn jirey iyadoo si dadban loo caayayo isla beeshaas.
Taasi waxay noqoto inay beeshu dad cadaawe dal cadaawe ka hoos gasho. Halkaana weerar xubaysan uga soo qaado taliskii dhiigyacabka ahaa soomaalina kusoo jeediso.idaacad ayaa la sameeyey ka hadla xumaanta iyo dhibaatada uu taliskaasi bulshada ku hayo.Bulshadii soomaaliyeed qaar badan ayaa baraarugey.”Hurgumo” Wuxuu ahaa Gabaygii Taliskii Siyaad Soomaali ku jafay.
Soomaali wada aragtay xumanta taliskaa.Kulli ss lawada noqoy lasoo jabhadee.Dadkii aanu kicinay ayaa qabiil ahaan dib noogu soo laabtay halkii ay nala tashan lahaayeen markii ay xukunkii iska dul qaadeen.Waxayna xasuuq aan loo meel dayin u gaysteen dadkii intaa oo sano lasoo dagaalamayey taliska.Daarood oo dhan ayaa la isku daray.
Dib iyagii dhibtii ugu celi.Wixii xaqdaro wadaa ma guulaystaane.
Gobaoladii Gaariwaaa oo gabaahiir ah la tag oo dadka sanado badan laga qixinayey.Laaxaar xaar oo nolol laga samee.Soomaali oo dhami kusoo hiratey iyadoon la kala soocayn.Boosaaso naoqotay dekedda qura ee shaqaysa markii Berbera iyo aagaa dagaalada isaaq dhexdoodu ka socday. Soomaali oo dhami wax kala soo dege. Qaab diimaysey soo dhaweyntii naloogu soo dhex dhuumay dagaal in nala gasho abaalkii soo dhawaynta noqoy.Itixaad meel iska saarnay.Hawshayadii iyo dhismihiina sii socoy.
Puntland iyo shacabkeedu waxay naf iyo maalb u huraan sidii dowlad hana qaada ay geyiga soomaaliyeed uga dhalan lahayd.
Xamar oo hogaamiye kooxeedyo kala qoqobeen oo airport ,deked iyo madaxtooyo midan aan 20 sano la gelin oo iska xiray ayaa.Alle talada gacanta u geliyey C/laahi Yuusuf waliba isagoon kusoo bixin jacay ay u qabeen reer muqdisho balse ku soo baxay isximin iyo collaytan ka dhexeyey beelaha hawiye.Waxay markiiba kala hor yimaadeen dagaal hubaysan marka laga reebo in yar oo caqli u saaxiiba mooyee.
Wax lagu sheegay maxkamado & Muqaawamo ayay sameeyeen.Waxayna beel walba samaysatay maxkamad.Waxay intaas oo dhan u samaynayeen maahayn aad nidaam iyo nabad gelyo heshaan ee waxay ka ahayd sidii C/laahi aanu cag usoo dhigi lahayn muqdisho.Dhulkii ay degaanka u lahaayeen oo dhan markii ay soo qabsadeen ayay bilaabeen inay dagaal laba af laah qaadaan mid ay Baydhabo oo xaruntii dowlad ah ku qaadaan kuna qabsadaan iyo mid ay deegaanka uu kasoo jeedey ku qabsadaan si aan gurmad dhankaa uga iman.Ismiidaamintii ugu horeeyey ee geyiga soomaliyeed ka dhaca ayaa C/laahi la damcay in lagu khaarajiyo alle tiisii ma gelin.
Isku daygaii Gaalkacyo isna waa fashilmay.Dhankii Baydhabana maalmo kooban ka bacdi Muqdisho ayaa la isla soo galay.
Muqisho iftiin ayaa kasoo iftiimay maalintii C/laahi iyo Geedi yimaadeen Viladii,dekkeddii iyo airportigiiba waa la furay laakiin waxaa hareeraha dhulkaa ku aasan dhalinyaro wada xul ah oo reer puntland ah oo dhiigooda u huray sidii ay u arki lahaayeen dowlad soomaaliyeed oo shaqaynaysa.
Inkasta oo meelhii mihiimka ahayd la furay hadana dad aan iyagu nidaam iyo kala dambayn rabin lama khasbi karo iyagoo waxa kaliya oo ay eegayaan ay tahay qabyaalad.
C/laahi markii uu tagey nin
God walaal ha qodin ku dhici doontidaana lama ogee.Ismiidaamintii maalintaa bilaabatay iyo qaraxyadii ilaa maanta waa kuwa socda.
Dowladiii muqdisho ka dhalata tan iyo 1969 waxay noqotaa mid wanaaga iyo soomaali jacaylka bulshada halkaa degani ay u qabaan abaal looga dhigo in lagu takooro ama lagu colaadiyo. Caqabadaha ugu badan iyo is af garan waaga ayaa had iyo gooraale ka dhasha inaan axdi,ballan iyo xeer la digano dad aan doonayn inay nidaamka iyo xeerka ay galeen dooneyn in lagu dharmo iyagoo ku diidaya kaliya amaa reer hebel wax ugu kordaan balse xaqiiqdu ay tahay in soomaaliya oo dhami ay dani ugu jidho xeer iyo nidaam dadka kala haga in lagu dhaqmo.Reer puntland waxay taagan yihiin nin aan taada diidan tiisana ha meel marin
Puntland 30 sano ayay iska biqlaynaysay.30-kaa sano lagama heli sguulo fiican,Jaamacado fiican iyo dhakhtaro fiican.
Fiiri,Kooxdii u ciyaaraysay Somaliya koobka aduunka wqaxay ahaayeen Reer Muqdisho.Waxay ahayd in la helo kooxo ka yimaada Puntland oo Somaliya u ciyaara.Laakiin lama hayo.
Maamulgoboleedka waxay u qaateen waxay u qaateen in lagu dibindaabyeeyo ama lagu dhibaateeyo dawlada dhexe.
30 kii sanadood ee ay dhaqaalaha aduunka heleen,waxba ma dhamaan Kismaayo ama Baydhabo. Waxay ahaayeen meelaha looga niikiyo Tegreega.Dalwlasnimadiiba waxay moodeen in loo niikiyyo Tegree iyo Emaaraatkkkkk
Haatana hayska biqleeyaan.
Puntland markii la wada lahaa Dowlad bay ahayd hadase Maxamud Saleebaan only ayey noqotay inta faroole kursiga kula fadhiisanayo qofkii
Madaxweynaha kanoda Garoowe meel uma socoto
Adigu adoon war uma haysid halkan baad ka maqashay anagoo leh waa reer muqdisho.
Laakiin sida xaqiiqada ah ciyaalkii meesha la isugu keenay waxay ahaayeen ciyaal qurbaha laga soo aruuriyey siiba wadanka Qatar.Koox koox markii loo ciyaaray soomaaliya waa la ogaa labadii mar ee la ciyaaray marna Puntland baa koobka qaadatay marna diqi ayaa looga badiyey.
Waxaad u sheegaysaa sidii qof samada ku nool
Puntland inay qodaxi muddo raalli kama ahi kanana noqon doono, shacabka Puntland waa dad isku tashaday oo waqti adag dhexda wada xidhay samaystayna nidaam iyo nolosha ay maanta ku naallonayaan.
Halse waan ka xumahay, oo ah in ay halkii ay Soomaaliya ka hagi lahaayeen dadaalna ugu bixin lahaayeen dhammaystirka wixii ay aasaaseen iyo dawladnimada ay ka doorbideen in ay bannaanka ka istaagaan.
Dalkani dawlad buu u baahanyahay, dawladna waa shacabka, shacabka iyo maammulka Punland kaalintooda inay ka galaan dhismaha iyo soo celinta dawladnimada ayaan aad uga jeclaan lahaa inay xanaaq biq isla siiyaan haddaan sida ay rabaan wax u dhicin.
DF waxaa hoggaamiyaa waa insaan, insaanna waa qaldamaa, hadday villadu ku xadgudubtay Puntland ma ahayn bes iyo nagu kala wada inay jawaabtu noqoto, ee waxaa haboonayd in la xaal-mastuuro iyadoo xilliga iyo xaaladaha dalka ku jiro la eegayo.
Difaac looma baahna.Halka la doono halaga keenee,saw Muqisho hawshaasi may keenin?
Yaa u diiday Puntland inay qaabkaa u fikirto?
Adigu ma waxaad naga iibinaysaa inaad puntand ku sheegto inay dhaanto Koonfur galbeed ama Hishabeele?
Haa,marka la qaylinayo ee dawlada dhexe dhabarka laga jabinayo,laakiin wax kale oo Somalinimo ah oo ay soo kordhiyaan ma jirto.
Baryahan meel baa la saaray oo waan ka nasanay shirkoodii iyo qayl
Ujeedkayga ayaa in ah 30 sano tahay muddo dheer,puntland ay nabad ahayd,dhaqaale badanna ay ka heshay Beesha caalamka,laakiin ma helin siyaasiyiin fiican oo u fikira heer qarannimo.
Oday Cabdulaahi ayaaba u roonaa markaad eegto wixii ka dambeeyay isaga.
Manta ma puntland ayey ka shidan tahay war dooda
Iska hagajiya dadka qaar waxay qorayan lama eegi
Karo … qoraladooda waxaa ka muuqda cuqdad iyo
Qabyalad ….. hal ogaada markasta oo dowlada
Somaliya xogaysato mamuladii hore ee jirey awood
Ahaan hoos u dhac baa ku imaanaya aan wada
Dhisto dowlada federalka si aan u wada gaarno
Danaha guud ee qarankena…cidii horay wax u
Dhisatay cida hada wax dhisanaysa waan u wada
Baahanay waana xoog somaliyed….. hada dowlada
Federalka iyo puntland waxaa ka dhexeeya.. wada
Shaqayn fiican….. yaan dheg loo dhigin wararka
Been abuurka ah oo lagu kala qaybinayo somalia
Horta xageed joogtey markuu Max’ed Dheere Laamiga Jowhar ugu xiirey C/llaahi Yuusuf, ee Habeenkii Tigree u qaxiyeen Baydhabo
6 bilood ayaa lagu hayey Jowhar markaas ayuu Hebeen madow la qaxiyey asagoon horey u sii qaatey JOODARIYAASHII (M. Dheere Sheegay)
Jurile ayaa London noogu sheegay wixii ku qabsadey Jowhar.
Reer Baydhabo ayaa Hadana ku bilaabey
Kadib ayaa CABDI QEYBIID iyo Ina Ceydiid Keenen Xamar,
Oo yaa ka celin wiilashii indhaha gaduudnaa, 2 bilood kadib ayuu Yemen Exile u qaabishey.
– Taangi Tigree Villa Xamar laguma joogo BOOWE.
Hadalka @ Mr Xaange waxaa ka muuqdo, C/llahi waa la diidey, ee Farmaajo maxaa loo soo dhaweeyey.
Boowe abtinimo iyo Seedinimo waa Xeer Soomaaliyeed
Horta waxeey ila tahay (Ilaaheey ayaa og walba’e) in mowduucaan eey qorreen dad Murusade Afar qooble sheegta, oo is leh taageero uga raadiya ra’iisalwasaaraha dowladda dhexe Majeerteenka. Amaba waxaa qoray dad Mareexaan sheegta, oo is leh, armeey dowlad dhexe, oo Mareexaan leeyahay, oo wadanka iyo dadka Somaliyeed ku tagrifalla idiin shaqeeysaa hadii aad Majeerteenka ku calaacashaan oo aad ka dhigtaan in eey “haybad eey lahaayeen eeysan hadeer laheeyn”.
Ilkayar Mareexaanku waxeeysan ogeeyn in eeysan Majeertenka mardanbe dabinkii kaligiis taliyanimada ugu soo dhaceeyn Mareexaanka amaba qoolkii uu sheegi jirray Jugle. Qoolkaas waxaad so far lahesheen daanyeerta Hawiyahaba sheegta, iyo Eelaayda iyo Jareerta “ar Farmaaja ii geeya”!
In eey wax u kordheen maahanee, Majeerteenka wax ugama nusqaamin intii eey dowladda madaxweeyne Farmaajo hogaamiya dalka xukunkiisa lawareegtay.
Now, waad ogtahiin in aan ahay dadka ugu horeeya ee sheega caqabada eey dadka Majeerteenka hogaamiya kuyahiin dowladnimada Somaliyeed. Laakiin, ugu yaraan, iyaga waxa eey rabaan waan ognahay. Daanyeertaan kale ee agoonta kacaanka yaa og waxa eey rabaan?
Jowhar markii C/laahi iyo dowladu sal dhigatay waxay noqotay magaalo madax ku meel gaar ah. Waxayna noqotay meel ka mida magaalooyin soomaaliya ugu shidan.Laakiin markii la ogodaaday inay guluf colaadeen Muqdisho uga soo wajahantahay ciidan ku filan iyo meel strategy ahna aanay ku oolin. Waxaa madaxdii dowladu go’aansadeen in laga guuro.maxamed Dheere oo ahaa nin ka baqaya inuu dhadhamadii uu u bartay waayo oo aan dooneyn in Jowhar meel kale looga diga rogto wuxuu bilaabay inuu afka qaylo ku shubto oo hadala munaasib aan ahayn idaacadaha lasoo istaago oo dhaho joodariyaa la iga xaday kkkkkkkkkkkkk.
Laakiin maanta waxaa hadalkaaga iiga baxay inaad iljeex tahay adoo libinta u diidan beesha mudulood ayaad tiri Cabdi qaybiid & Ina caydiid baa C/laahi soo kaxeey.Riyo haday bari leeyihiin dabadooda ayay ku dadan lahaayeen.Inta ay cid soo kaxaynayaan maxay iyagu u tagi waayeen.?
Dhaqaalaha Fifa bixiso muqdisho ayay ku baxaan. Waxaana ka dhisan wasaarada sportiga qaranka wax lagu magacaabo oo dhaqaalahaa lagu bixiyo oo ninka meeshaa madaxda ka ah aan jeebkiisa soo dhaafin.
Dhalinyaro talent leh gobol walba waa laga helayaa inta tageen ma isku dayeen inay dadka ugu wanaagsan soo xulaan,mise marka ciyaar la qabanayo ayay soo kaxaystaan dawr wiil oo qaraabonimo iyo eex ay kusoo kaxaystaan oo xitaa aan ahayn kuwa kuqdisho ugu wanaagsan.?
Puntand haddii meel la saaray oo laga maarmay waayahee aanu aragno waxa ay soo kordhiyaan qolada hadda joogta ee gabbalkoodu sii dhacayo
Siday tahay ayaad u dhigtay wax naga hallaabay ma jiraan si kasta oo geesta naloo geliyo walaahi dhiiranaan iyo isku tashi dheeraad ah ayaa nooga sii kordha ee wax nusqaan ahba nooma laha.Waxaa la yiri nin cadhuuf kugu tufay waxba kuma yeeline calooshiisa ayuu ku tusay. Qoladan iyagoon waxba ahayn is mahadiyey wax ay naga qaadayaan malaha.
Pudland. Meel saaroow uma baahno. Kaliya waa in la furaa dekadda hobyo. Hadaan layska hor kooyin kobta badar iigu bixiya.
Dadka ugu badan ee isticmaalo wexey ka safraan. Mudug galmudug. Ilaa hiraan.
Xaange adeer, horta waa lagugu shamuumay ANNA cad yar baan kaa goosan. °Adeer markaan buugaagi aqriyay waxaa ii soo baxday inaadan weli isku deyyin isxisaabin autocritico oo ay taadu tahay NINKII DHULKA JOOGA ADDOONKAYGI WAAYE °NINKII SARTA FUULA SULDAAN CALI WAAYE. °Intaa markaan iri, waagaan dhallinyaraa ayyaa Aabe iyo qaraabadi ila jeclaadeen gabar aan isku jufo hoose nahay ANNA waxaamba aaminsanahay inay walaashay tahay oo aanan geyn. °Maadama uu adeerkay dhalay waxaan tegi jiray gurigooda. °Mar ALLA oon isku cidlaysanno intooy miraayadda tagto ayay, Bogga, Naasaha, Timaha iyo intay gacantu gaarto (gaadho) iska salaaxdaa. °Lakala war LÀ anna waxaan u haysta waa Walaasha oo maba gaysid, MARKAASAN ula baxay ISUBEGA, Hadda Buugga Xaange marna sooma sheeg qaadin qalad dhanka Beeshiisa ka yimid ANNA ma rabo inaan boogta ka dhimiyo BALSE waxaan leeyahay Xaangow ILAAHEEN SWT ummadiisa uma kala eexan oo ma dhihin Reer Xaangena waxaan siiyay; Mudnaan, Caqli iyo Dadnimo reer Dabshidna Dacda ha gal-gashaan. °Fallaarti ugu dambaysay; Xaangoow ogow inay beeshadu WIXII dhacay iyo Qaran jabki ay mas-uul ka ahayd iyo ANNAGOO joogna sideebuu M/rexaan madax u noqon karara. °Adeer wuxu waa taariikh qoran ee caarootan iyo midi midi ku taag ma aha. °SALAAMA. WBT
Sxb, Reer puntland oo ilaa xoriyadii u halgameyey oo markii xorayadii timid Kacaankii geed ku xiray.
Sheik Shariif iyo Xasan Sheik meelo shaqo ka siiyeen..
Farmaajo kulli xilkii ka wada qaaday, Cawad baa haray oo shaqo culus haya oo Khayre ka celiyo.
Daanyeertaan Ilkayar MJ maxaa ku diray.
Siyaad Bare maalintii dalka inqilaabay oo jagada hayey Yasin Nuur Xasan Bide u dhiibay, maalintii dalka xoog ku qabsaday, wax alla wixii MJ jago hayey ka simay dil, xarig ama ruqso.
Wuxuu yiri ”Faraha mid baa ka dheer, waa balan faraha la simo, asagoo Majeerteen ka wada”
Najis Quule cun badan aka Iljayar.
Cadaado Majeerteen mardambe horta qabiil nalagu siri maayo ama wadanimo bug ah sidii Kacaankii Daanyeerka ahaa, dhul weyn oo alle na siiyey mise xoog ku helnay ma ogi, 1/3 of Somalia..kkkkkkkk
Hadaan ka gaajoono, dee aan iska dhimano..
Aniga Darwinist ahay= Survival of the fitest.
Macanaha daanyeertii wax qabsan karin haloo taliyo……..kkkkkkkkkkkk joke.🤗
Vivo Dhulka Udug🇸🇱